FAA waxay ku dhawaaqday $ 76 milyan oo ah deeqaha horumarinta garoonka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » FAA waxay ku dhawaaqday $ 76 milyan oo ah deeqaha horumarinta garoonka
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xoghayaha Gaadiidka Mareykanka Pete Buttigieg
Casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa ah mudnaanta koowaad ee ajendaha dhaqaale ee Madaxweyne Biden, iyo Barnaamijka Hagaajinta Gegooyinka Diyaaradaha ayaa u oggolaanaya garoomada dalka oo dhan in la casriyeeyo lana wanaajiyo amniga xarumahooda.
Saddex deeqo oo loogu talagalay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo loo marayo Barnaamijka Hagaajinta Madaarka FAA FY2021 ayaa lagu dhawaaqay
Deeqaha waxay siin doonaan $ 76 milyan Chicago O'Hare International, Dallas-Fort Worth International iyo Fort Lauderdale / Hollywood International Airport
Saddexda garoon diyaaradeed waxay ku helayaan lacag hoosta shuruudaha Waraaqaha Ujeedada ee ay horay u soo saartay FAA, oo ay ku go'an tahay jadwalka maalgelinta deeqda ee ku baahday sanado badan oo maaliyadeed
Waaxda Gaadiidka ee Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqday saddex deeq oo loogu talagalay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha iyada oo loo marayo Maamulka Duulista Hawada Federaalka (FAA) FY2021 Barnaamijka Hagaajinta Madaarka. Deeqaha, oo ah kii ugu horreeyay ee qiyaastii $ 3.2 bilyan oo maalgelin ah oo laga heli karo barnaamijkan sannad kasta, ayaa wadar ahaan $ 76 milyan siin doona Chicago O'Hare International, Dallas-Fort Worth International iyo Fort Lauderdale / Hollywood International Airports.
"Casriyeynta kaabayaasha qarankeena waa mudnaanta koowaad ee ajandaha dhaqaale ee madaxweyne Biden, barnaamijka hormarinta garoomada diyaaradaha wuxuu u ogolaanayaa garoomada dalka oo dhan inay kor uqaadaan oo ay hagaajiyaan amaanka xarumahooda," ayay tiri Xoghayaha Gaadiidka Mareykanka Pete Buttigieg. “Horumarradan - qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu mashquulka badan waddankeenna — waxay u adeegi doonaan bulshadeenna iyo dadweynaha socdaalka ah markaan billaabayno inaan dalkeenna dib ugu dhisno si ka wanaagsan.”
Saddexda garoon diyaaradeed waxay ku helayaan lacag hoosta shuruudaha Waraaqaha Ujeedada ee ay horay u soo saartay FAA, iyagoo u qoondeeyay jadwalka maalgelinta deeqda ee ku baahday sanado badan oo maaliyadeed. Abaalmarinta deeqda waxaa ka mid ah:
Chicago O'Hare International waxay heli doontaa $ 25 milyan si ay ugu celiso garoonka diyaaradaha wajiga dhismaha ee Runway 9C / 27C oo ay ku jiraan adeegyada goobta, qiimeynta iyo shaqada laamiga. Runway 9C / 27C waxaa la howlgaliyay Nofeembar 5, 2020.
Dallas-Fort Worth International waxay heli doontaa $ 31 milyan si loogu dhiso 10,200 cagood oo dhamaadka Woqooyi bari agagaarka nidaamka tagaasida si looga takhaluso baahida loo qabo in diyaaraduhu ka gudbaan runwaysyada firfircoon. Wadooyinka tagaasida waxaa lafilayaa in ladhameeyo Sebtember 2025.
Fort Lauderdale / Hollywood International waxay heli doontaa $ 20 milyan si ay dib ugu soo celiso garoonka diyaaradaha si loogu kordhiyo Runway 10R / 28L ilaa 8,000 feet. Kordhinta ayaa u oggolaaneysa mugga adeegga sare ee diyaaradaha iyo yareynta daahitaanka taraafikada jira. Kordhinta Runway 10R / 28L waa la dhammaystiray oo waxaa la shaqeeyay Sebtember 18, 2014, dhammaan horumarinnadii la xiriirayna waxaa la dhammaystiray Sebtember 2015.
"Mashruuc kasta oo garoon diyaaradeed wuxuu faa'iido u leeyahay Nidaamka Hawada Qaranka iyada oo loo marayo nabadgelyo iyo kor u qaadista awoodda," ayuu yiri Maamulaha FAA Steve Dickson. Duuliye diyaaradeed oo hore, waxaan markhaati ka noqon karaa in dadweynaha socdaalka sida ugu fiican loogu adeego marka nidaamku wax ka qabto iyadoo aan loo baahnayn daahitaan. ”
Barnaamijka Hormarinta Madaarku wuxuu maalgeliyaa mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee garoonka sida runways, jidadka tagaasida, calaamadaha garoonka, nalalka garoonka iyo calaamadaha garoonka. Sannadle, barnaamijka deeqda waxaa lagu maalgeliyaa qiyaastii $ 3.2 bilyan. Kuwani waa saddexda deeqo ee ugu horreeya in ka badan 1,500 oo deeqo boqolaal garoomada diyaaradaha Mareykanka ah oo ay FAA soo saari doonto sannadkan.